लौठसल्ला: जीवन रक्षामा हिमाली वरदानको खोज यात्रा
होन्डा युनिकर्न १६० सि.सि बाईक पछाडीको सिटमा कक्रिएर, समुन्द्र सतहबाट ५२०० फिट उचाईका घुमाउरा बाटोहरुमा हुँइकिरहदा मेरो मस्तिष्कमा एउटै कुरा घुमिरहेको थियो “ओहो ! गल्ति पो गरियो कि ? आखिर किन मैले कलेजको आन्तरिक परिक्षा छोडे? के मध्ये नेपालको सुदुर भिराला पहाडका जङ्गलहरुसँग पैठेँजोरी खेल्न?” प्रश्न अनुत्तरित थियो ।
पूर्वी आकाशको उदाउदो सुर्यले क्षितिजलाई सुन्तला रङको क्यानभासमा उत्तारेको झैँ रंगको होली नै खेल्दै थियो । बिहानीको पहिलो किरणलाई स्पर्श गर्न नपाउदै मेरा आँखा अगाडीका दृश्यहरु धमिला थिए । माघको मध्यजाडोमा हुँइकिरहदा मेरा आँखाहरु रसाइरहेका थिए, कान चिसोले कठ्ङ्ग्रिएको थियो । शिरको पातलो ऊनिको टोपिले चिसो हावालाई थेग्न सकिरहेको थिएन । चिसोले हात पनि सायद जम्नै मात्र बाँकि थियो । “छ्या, यो टोपी पनि के साह्रो पातलो लाएछु । धेत्तेरी!” टोपीको एउटा फुर्को तान्दै म केवल पछुताईरहे ।
बिहानीको चिसो सिरेठोलाई चिर्दै बाईक बेपत्तासँग हुइकिरहेको थियो । हावाको चिसो वहाबलाई छेक्न म साथी प्रकाश पौड्यालको पिठिँऊ पछाडी आफुलाई लुकाउने सक्दो प्रयास गरिरहेको थिए । कच्ची बाटोमा बाईक थोरै हलचल हुँदा पनि मित्रलाई दरोसँग समातेर सकेसम्म आफुलाई स्थिर राख्ने कोसिस गरिरहे ।
आन्तरिक परिक्षालाई बिचमै छोडेर प्रोफेसरहरुको विश्वासलाई धोका दिने मेरो कुनै मानसिकता थिएन तर प्रकाश स्वंयमले फोन गरेर यो भ्रमण अनि अध्ययनको औचित्य बुझाएपछि भने मैले आफुलाई रोक्नै सकिन । हुन त सरकारी कलेजहरुमा हुने आन्तरिक परिक्षा केबल औपचारित्ताको लागी मात्र हुने गर्छन् त्यसमाथी मेरो साथमा प्रकाश थियो जस्ले यस्ता धेरै परिक्षालाई छोडी छोडी यस्ता कार्यमा संलग्न थियो । काठमाण्डौँ अवस्थित ‘ग्रिनहुड’ नामक गैर नाफामुलक जैविक विविधता संरक्षण संस्थानमा प्रकाश जस्ता थुप्रै बाहदुर साथीहरु थिए जो यस्ता परिक्षाको भुतलाई पन्छाउन सक्थे । सायद म ती बहादुरहरु जतिको बहादुर थिइन की?
म ‘सञ्जय पौडेल’लाई सम्झिन्छु जो प्रकाशको साक्खै भाईखलक पर्छ र उ पनि ‘ग्रिनहुड नेपाल’मा लामो समय देखि संलग्न छ । उ भन्ने गर्थ्यो, “पट्यार लाग्दा लेक्चरहरु लिनु र फगत किताबी किरो हुनुभन्दा आफुलाई भित्री मनदेखि लागेको कुराहरू गरेकै बेस लाग्छ यार । त्यसैले म कलेज त्यति जादिॅन ।” कलेजका कक्षाहरुमा उसको उपस्थिति न्यून नै थियो । हामी एउटै कलेजमा पढेपनि उसँग खासै भेट कहिल्यै भएन । पछी ग्रीनहुडमा नै चिनजान भयो । सन् २०१२ मा ग्रिनहुड नेपालको स्थापना हुदा उसको अंकल ‘कुमार पौडेल’ सह-संथापक थिए र त्यहि समयदेखि सञ्जय पनि संरक्षण गतिबिधिमा अघि बढे । यसरी वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा केहि गर्छु भन्नेहरुको लागि ‘ग्रीनहुड नेपाल’ एउटा हब बनेको रहेछ । दुइपाङ्ग्रेमा बसी सयौं माइलाको यात्रा तय गर्नु, संरक्षणका विषयमा वकालत गर्नु र कठ्यांग्रिदो चिसो हावामा रमाउन सक्नु उनीहरुको लागी कुनै नौलो कुरा पक्कै थिएँन ।
ग्रामिण नेपालमा भेटिएका लौठ सल्लाका पातहरुको तस्विर (सौजन्य संजय पौडेल)
आज प्रकाश र मेरो यात्राको गन्तव्य पनौती नगरपालिकाको भुमिडाँडा क्षेत्र थियो जहाँ हामीले हाल नेपालमा संकटापन्न अवस्थामा रहेको ‘लौठ सल्ला’ अर्थात ‘ट्याक्सस माइरेई’ को तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने थियो । यो यस्तो किसिमको सल्लाको प्रजाति हो जसको नामकरणको विषयमा बर्षौ देखि सरोकारवालाहरुको नै फरक-फरक मत रहेको छ । यसलाई कुनै समयमा युरोपमा प्रसस्त पाइने ‘टाक्सस बाकाटा’ भनियो पछी दक्षिण-पश्चिमी एसियाली भूभागमा पाईने अर्को सल्लाकै एक प्रजाती ‘टाक्सस वालिचियना’ मानियो जस्लाई रैथाने हिमाली सल्ला पनि भनिन्छ । त्यसैले यसको संरक्षणमा खासै धेरै चासो दिइएको पाइदैन । डी. एन. ए. बार कोडिङ प्रविधिबाट यसलाई माथि उल्लेखित प्रजाति भन्दा फरक हो भनेर छुट्याउन सफल भएता पनि सरोकारवालाहरु बिच नामको विवादको टुंगो अझै लागेको छैन ।
अघिल्लो दिन मात्रै प्रकाशले मलाई फोन गर्दा भनेको थियो की ‘टाक्सस माइरेई’मा हामीले गर्न लागिएको यो सर्भे नेपालमा यस प्रजातिमा गर्न लागिएको पहिलो सर्भे हुनेछ । “मलाई लाग्छ यस प्रजातिको सल्लाको संख्या पुरा देशभरमै ज्यादै न्यून छ, तर त्यो न्यून भनेको कति हो ? बेहिसाब छोडिएका सल्लाहरुको गन्ति यो सर्भेबाट थाहा पाउन सकिन्छ, ” प्रकाश भन्थ्यो ।
“ओहो ! महत्वपूर्ण कुरा नै पो रहेछ ।” सायद म यो अनुसन्धानमा सामेल हुनैपर्छ, मलाई लाग्यो । त्यसको २४ घण्टा नबित्दै म होन्डा बाइकको पछाडी कक्रिएर आफुलाई सराप्दै भुमिडाँडातिर हान्निए । अब समय हातबाट छुटीसकेको थियो र फर्किएर परीक्षा दिन जान सकिने कुरा पनि थिएन ।
भुमिडाँडा यात्राको बाटो त्यति सहज थिएन । गाउँको बाटो, धुलो र खाल्टाखुल्टिले भरिएको सडक । अरनिको राजमार्ग हुदैँ बनेपा सम्म र त्यसपछि पुरातात्विक महत्व बोकेको पनौती शहरलाई एकफेरो लगाएर हामी दक्षिण-पश्चिमतिर लाग्यौँ । रोशी क्षेत्र नजिकै पुग्दा देखिएका अब्यवस्थित ढुङ्गा खानी र कुरुप पहाडको दृश्यले हाम्रो आङ नै शिरिङ्ग भयो । लथालिङ्ग ढलेका रुखहरु, निर्जन गाउँका बस्तीहरु र रित्ता घरहरु देखेपछि यस्तो लाग्यो की यो क्षेत्रमा भईरहेको खानी उत्खननले पर्यावरण साथै सामाजिक वातावरणमा प्रतिकुल असर पारेको रहेछ । प्रकृति माथिको दोहनले जङ्गल र बस्तिहरू त उजाडियो नै माइरेई यीउ जस्ता सकटापन्न अबस्थाका बनस्पतिको त झन के हाल भयो होला, तपाई अनुमान मात्र लगाउन सक्नुहुन्छ ।
दुई ठुला पहाडहरुको काखबाट सडक अगाडि बढेको थियो र छेवैबाट रोशी नदी जोसजाँगर लगाएर सुसाउदै तलतिर बग्दै थिइन् । एका तिर नदिको सुरिलो सुसाहट, अर्को तिर खानी उत्खननको कर्कश आवज दुबै मेरा कानहरुमा एकैसाथ गुञ्जायमान भए । जसै हामी अगाडी बढौँ सडक छेउ टिप्परहरुको लामो लाईन थियो । नदिबाट आइरहेको चिसो हावाले हाम्रो आँतलाई भिजाइरहेको थियो भने उत्खनन स्थलबाट निस्किएका धुलोको बादलले आकश पुरै ढाकेको थियो । प्रकृति र मानवको यो अघोसित लडाईको चपेटामा बिचरा ति निर्दोश जीवजन्तु र वनस्पति कहिलेसम्म पर्ने हुन, सम्झेर उदेक लाग्यो ।
रोशी नदिबाट करिब ३० मिनेटको यात्रापछि हामी सुन्दर गाँऊ कलान्ती पुग्यौँ जहाँ हामीले भिम दाईलाई भेट्नु थियो । हाम्रो अबको बाँकी यात्राको गाइड उनै भिम दाई हुनुहुन्थ्यो । जादैँ गर्दा गाउँको ठाँउठाँउमा रोकिएर हामीले स्थानियहरुलाई भीम दाइको घर र लौठ सल्लाको बारेमा उनीहरुको जानकारी पनि सोधेका थियौं । कतिपय समय हामी माथि नै प्रतिप्रश्न भयो । हामीले यात्राको अभिप्राय स्पष्टसंग राख्यौं र आशङ्कालाई शान्त पार्दै आउनुको कारण बतायौँ ।
भुमिडाडा क्षेत्रको सुन्दर दृश्य (सौजन्य सौगात बोलखे)
कुराकानीको शिलशिलामा थाहा भयो की यस अघिपनि ग्रीनहुड नेपालका अन्य साथीहरु सुरुका कार्ययोजनाको सिलसिलामा यो क्षेत्रमा थुप्रै पटक आइसकेका रहेछन् । त्यसैले यहाँका केहि मानिसहरुलाई थोरै बहुत भएपनि ग्रीनहुड नेपालको कामको बारेमा जानकार रहेछन् । ग्रिनहुड नेपालले लौठ सल्लाको तथ्याङ्क मात्र बटुल्दै थिएँन बल्की स्थानीयहरुलाई दिगो उत्पादन, परिवर्तन र संरक्षणको आवश्यकता पनि बुझाउदै थियो । जंगलमा रहेका लौठसल्लाको प्रजातिको संरक्षण र दिगो उत्पादनका ब्यबस्थित तरिकाहरु सिकाउने यो प्रोजेक्टको पनि अभिप्राय रहेको कुरा मलाई ग्रिनहुडका प्रोजेक्ट इन्चार्ज रेसु बस्याल बताउनु भएको थियो ।
प्रोजेक्टको सुरुवाति दिनहरुमा बस्याल र उहाँको टिममा केहि अलमलको अवस्था थियो किनकी यो कार्यक्रम मार्फत स्थानिय बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार सम्मका लक्ष्यहरु सामेल थिए । यो कार्यक्रमलाई संरक्षण नेतृत्व कार्यक्रम (कन्जर्भेसन लिडरसिप प्रोग्राम)ले सहयोग गरिरहेको थियो । “लिडरसिप प्रोग्रामले समुहका सदस्यहरुलाई आर्थिक रुपमा मात्र सहयोग गरेन, उचित तालिम तथा सहजीकरणको पनि ब्यवस्था गर्यो र कार्यक्रम उचित ढंगले सुरु भयो,” बस्याल भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
संस्थाको यहि प्रतिबद्धताले गर्दा वातावरण संरक्षणमा गतिला कमदहरु पनि चालिए । काभ्रेकै ढुंगखर्क क्षेत्रको ‘चलाल गणेशथान’ मा सञ्चालन हुदै गरेको ढुंगा उत्खनन कार्यलाई रोकेर ३०० वर्ष पुरानो लौठ सल्लाको रुखलाई संरक्षण गर्न पनि संस्थाले काम गरेको प्रकाशले बताए । “हामी साँच्चै भाग्यमानी रहेछौ, कि शताब्दिऔँ पुरानो लौठ सल्लाको रुखको बारेमा हामीलाई सहि समयमा जानकारी भयो र सानै भएपनि काम गर्ने अवसर पायौं,” प्रकाशले बताए ।
लगभग ३०० वर्ष पुरानो लौठ सल्ला संरक्षणको लागी बन्द गराइएको ढुंगा उत्खनन कार्य (सौजन्य: संजय पौडेल)
“काम पक्कै सजिलो त थिएन नै तर संस्थाको अभिप्राय नै संरक्षणको वकालत गर्ने भएकाले किनकिन यो अन्यायलाई हामीले वेवास्ता गर्न सकेनौं,” ग्रीनहुडका सह संस्थापक कुमार पौडेलले म संगको पछिल्लो भेटमा बताउनु भएको थियो । ग्रीनहुड टिमले वकालत गर्ने क्रममा काभ्रे जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुको साथै केन्द्रिय सरकारलाई समेत झक्झकाउन “हेल्लो सरकार” कार्यक्रम मार्फत अबगत गरायो । जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले उचित समयमा तदारुक्ताका साथ यो कार्यमा अघि बढायो र संरक्षण अधिकारीलाई समेत फिल्डमा खटायो । फलस्वरुप ३०० वर्ष पुरानो लौठ सल्लाको रुख वरपर तारबार लगाउने र सो ढुंगा खानीका मालिकलाई क्षतिपुर्ति दिइने गरी संरक्षणको काम थालियो । अहिले उक्त रुख वरपर तारबार सहित एक होर्डिंग बोर्ड पनि लगाइएको छ जस मार्फत स्थानीयहरूले लौठ सल्लाको महत्वको बारे जानाकारी पनि पाएका छन् ।
शताब्दिऔँ देखि मानिसले लौठ सल्लालाई दुईधारे तरबारको रुपमा हेरेको पाइन्छ उचित प्रयोगले यो अचुक औषधि थियो भने अनुचित प्रयोगले प्राण पनि सजिलै लिन सक्दथ्यो ।
पचास ग्राम लौठ सल्लाको पातहरुले कुनै एक स्वस्थ व्यक्तिको मुटुको धड्कनलाई बन्द गराइदिन सक्छ । प्राचिन समयमा यसलाई “मृत्यु मेसिन”को रुपमा समेत प्रचलित गराइएको थियो जसको प्रयोग ब्रिटिस राजाहरु देखि सेल्ट्स, रोमानियाँ, ग्रीक, इजिप्सियन आदी सबैमा रहेको पाइन्छ । सेक्सपियरको “द ट्राजेडी अफ म्याक्बेथ”मा समेत लौठ सल्लाको तिखा पातहरुको चर्चा गरिएको पाइन्छ । प्राचिन क्रिस्चियन समुदायमा लौठ सल्लाका कलिला मुनाहरुलाई दिबंगत शरीरसंँगै पुर्ने चलन समेत रहेको पाइन्छ । पश्चिमाहरुले “इस्टर पर्व” मा जीतको संकेतको रुपमा समेत लौठ सल्लाको प्रयोग गर्दथे ।
लौठ सल्लाको प्राणघातक विशेषताहरुको बारेमा त अधिक्तम मानिसहरु जानकार नै थिए तर जीवन बचाउन समेत प्रयोग गर्ने कुरामा भने अनविज्ञ थिए । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने युवा वैज्ञानिक तथा वनस्पति विज्ञ बने ‘अर्थर बार्कक्ले’ जो अमेरिकी उत्तर पश्चिमी प्यासिफिक भूभागमा क्यान्सरको अचुक औषधि बनाउन सक्ने बिरुवाको खोजीमा निस्किएका थिए । १९६२ अगस्ट महिनाको चर्को घाममा अर्थर बार्कक्ले वासिङ्टन प्रान्तको जिफोर्ड पिन्चोट राष्ट्रिय जंगलमा एउटा चिटिक्कको सानो कोणधारी सल्लाको रुखलाई हेरिरहेका थिए । हार्भर्ड विश्व-विधालयबाट तालिम प्राप्त वनस्पति विज्ञ उनि कृषि अनुसन्धान सेवा अन्तर्गतको न्यु कर्पस रिसर्च शाखामा कार्यरत थिए जुन यु.एस.डी.ए अन्तर्गतकै एक बिभाग थियो । खोजीको क्रममा २५ फिट लामो लौठ सल्लाको प्रजाती भेटियो, ट्याक्सस् ब्रेभिफोलिया । त्यसलाई उनले बी-१६४५ नामाकरण गरे किनकी बार्कक्लेले भेटाएको यो १६४५ औँ नमुना थियो । बार्कक्ले लगायत उनका स्नातकोत्तर बिधार्थीहरुले यस सल्लाको काण्ड, फल साथै काण्डको बाहिरी बोक्राको नमुना संकलन गरेका थिए ।
बार्कक्लेले ट्याक्सस् ब्रेभिफोलिया रुखको नै नमुना बटुल्नुको कुनै ठोस् कारण भने थिएन किनकी उनि क्यान्सर उपचारमा उपयुक्त हुनसक्ने सम्पूर्ण बिरुबाहरु खोजी रहेका थिए । अमेरिकी अनुसन्धान संस्थानहरुलाई पनि यस प्रजातिको विरुवाको बारेमा त्यति जानकारी थिएन । यस प्रजातिका सल्लाहरु अमेरिका, युरोप तथा एसियाका भूभागमा प्रशस्त पाइन्छन् । प्यासिफिक यिउ अर्थात ट्याक्सस् ब्रेफिफोलिया ठिक्कको उचाई हुने सल्ला हो जसको रातो बोक्राहरु, फराकिला अनि एक हदसम्म घुमेका पातहरु हुन्छन् भने काण्ड घुमाउरा अनि चिटिक्क परेका हुन्छन् । विशेषगरी यस प्रकारका रुखहरु घना कोणधारी जङ्गलहरु, नदिको तटहरु, गहिरा ओसिला खोल्सोहरुमा पाइन्छ । यसका बलिया काण्डहरुको सिमित मात्र प्रयोग हुने रहेछ । यस भित्र ज्यादै थोरै मात्रामा प्राकृतिक पेस्टहरु पाइने र धेरै जसो पेस्टहरू विषालु हुनेहुदा यसको कम उपयोग भएको रहेछ साथै यसको वृद्धि विकासको दर निकै नै सुस्त पनि हुन्छ ।
बार्कक्लेले संकलन गरेका नमुनाहरू अन्ततः ४५०० किलोमिटर टाढा नर्थ क्यारोलिनामा अवस्थित रिसर्च ट्रयाङ्गल नामक संस्थामा पुग्यो तर सुरुवाती चरणमा हजारौं स्याम्पलहरु अनुसन्धान गर्न नै वर्षौ लाग्यो । तर यो अनुसन्धानमा डा. मन्रो वाल र डा. मंसुख वानीले उपलब्ध भएका नमुनाहरुलाई वर्षौसम्म परिक्षण गरिरहे र दशौं वर्षको अन्तमा उक्त नमुनाबाट ट्याक्सोल निकाल्न सफल भए । ट्याकसोलको नामाकरणमा ‘ट्याक्स’ शब्द “ट्याक्सस्” बाट लिईयो भने ‘ओल’ अल्कोहलको रसायनिक नामबाट राखियो । ट्याक्सोल पछि गएर विशेषगरी अर्बुद्ध (क्यान्सर) रोगको उपचारमा प्रयोग हुनेगरेको एक महत्वपुर्ण रसायन हो ।
तस्बिरमा डा. मन्रो वाली (दायाँ) तथा डा. मंसुख वानी (बायाँ)
ट्याक्सोल पत्ता लागेको करिब तीन दशकपछि मात्रै यसको उपयोगिता मानव स्वास्थ्यमा ‘रामवाण’ साबित भयो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई उपचार नै गर्न नसकिने स्तन, पाठेघर, अन्डकोष, स्वास-प्रस्वासनलीमा हुने क्यान्सरको उपचारको लागी प्रयोग गर्न सकिने एक अचुक औषधिको रुपमा परिचित गरायो । यी रुखहरुबाट जीवन बचाउने ट्याकसोल बनाउने सिलसिलामा प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका लौठ सल्लाहरुको काण्डबाट बोक्रा निकाल्न थालियो । तब यी रुखहरु नै सिद्धिने खतरा भयो । एक स्रोतका अनुसार, २०० वर्ष लगाएर ४० फुट अग्लो रुखको बोक्राबाट केवल आधा ग्राम मात्र औषधि निकाल्न सकिन्छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका अँड्रे अभान्सिनो ट्याक्सोलको औषधि उपभोग गर्ने पहिलो बिरामी थिए, जसको उपचारको क्रममा सय वर्ष नाघेका ६ ओटा सल्लाका रुखहरुले आहुती दिनु परेको थियो । विडम्मना, कुनै मानिसको जीवनको लागी रुखहरु हजारौँ पटक चिराचिरा हुन बाध्य भए ।
अब उपचार एकजनाको गर्नु थिएन, करोडौको गर्नु थियो ।
यी रुखहरुबाट जीवन बचाउने ट्याकसोल बनाउने सिलसिलामा प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका लौठ सल्लाहरुको काण्डबाट बोक्रा निकाल्न थालियो । तब यी रुखहरु नै सिद्धिने खतरा भयो । एक स्रोतका अनुसार, २०० वर्ष लगाएर ४० फुट अग्लो रुखको बोक्राबाट केवल आधा ग्राम मात्र औषधि निकाल्न सकिन्छ । .
यता अमेरिकी वन सेवा बिभागले लौठ सल्लाको उपयोगको गर्ने नाममा जनशक्त्तिहरु भर्ति गराएर माउन्ट हुड राष्ट्रिय जङ्गलका रुखहरु काट्न र बोक्राहरु निकाल्ने अनुमति दिन थाल्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघिय सरकारको मातहतमा रहेको जङ्गलले अत्याधिक माग रहेको चमत्कारीक औषधिको मागलाई पुरा गर्न सकेन । प्रशान्त उत्तरपश्चिममा रहेका वातावरणविद्धहरुले प्रशान्त क्षेत्रमा लौठ सल्लामाथिको ह्स्तक्षेप विरूद्धमा आवाज उठाए । भाग्यवश डा. रोबर्ट होल्टनले टाक्सोल उत्पादन गर्ने अर्धविश्लेषक तरिका प्रतिपादन गरे । उनको यो आबिष्कारले उनी तथा फ्लोरिडा स्टेट विश्वविधालयले ३३५ मिलियन डलर भन्दा धेरै रोयल्टि प्राप्त गरे जुन विश्वविध्यालयको लाईसेन्स् प्राप्त प्रविधिले दिलाएको सबभन्दा ठुलो धन राशि हुन गयो । वर्तमान समयमा डा. होल्टनको प्रविधि अनुसार लौठ सल्लाको पातहरुको प्रसोधन गरी 10-DAB III, उत्पादन गरिन्छ जुन ट्याक्सोल बनाउने एक मुख्य रसायन हो । .
माइरेई यिउ फसलको क्रममा स्थानीय एक व्यक्ति (सौजन्य: संजय पौडेल)
ट्याक्सोलको उत्पादनको लागी कुन प्रजातीमा ज्यादा एकाग्रता पाइन्छ भन्ने विषयको खोजी हुन थाल्यदु जसबाट धेरै प्रतिशतमा रसायन निकाल्न सकियोस् । यस्तै सल्लाको प्रजतिहरुको खोजी र अनुसन्धान संसारभर फैलियो र अन्ततः नेपालसम्म आइपुग्यो । “नेपालमा पाईने रैथाने लौठ सल्ला अर्थात ट्याक्सस् माइरेई बाट निस्कने ट्याक्सोल क्यान्सरको उपचारको लागी प्रयोग गरिने औषधिहरु मध्ये उच्च एकाग्रता रहेको प्रजाति हो ”, हिमाल खबर पत्रिकामा राजेन्द्र मादेन लेख्नुहुन्छ । तर नामको दुबिधाले गर्दा नै लौठ सल्लाको ब्यापारमा ठुलो असर परेको छ किनकी माइरेई यिउ (ट्याक्सस् माइरेई) लाई इङ्लिस यिउ वा हिमालयन यिउको नामले बेच्दा यसको मुल्यमा धेरै अन्तर पर्न जान्छ । यसको बर्गिकरण र नामाकरणमै अन्योल भएतापनि अन्तराष्ट्रिय बजारको मागका कारण स्थानिय स्तरमा उत्पादनले दबाब दिएको छ जस्को प्रत्यक्ष प्रभाब बन जङ्गलमा रहेका माइरेई यिउमा परेको छ ।
सन् २०१२मा नेपाली वनस्पति शास्त्री रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोलिले हिमाली क्षेत्रमा रहेका लौठ सल्लाहरुको बर्गिकरण र फैलावटलाई स्पष्ट पार्न यसको बाहिरी बनावट, वंशाणुगत अध्ययन तथा मौसमी तथ्याङ्कहरू संकलन गरे । यस अध्यनबाट नेपालमा तीन प्रजातिका ट्याक्सस् रहेको पाईयो जसमा ट्याक्सस् वालिचियाना (हिमाली यिउ), ट्याक्सस् कोन्टार्टा ( पश्चिमी हिमाली यिउ) र ट्याक्सस् माइरेई ( माइरेइ यिउ) रहेका छन् । विस्तृत अध्यनबाट के थाहा भयो भने नेपालका तीन जिल्लाहरू सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक र मकवानपुरमा माइरेइ यिउ प्रजातिको पाइन्छ यद्यपि तिनको अबस्था संङ्कटापन्न रहेको हुनसक्ने दावी गरियो ।
तर यसको उचित तथ्याङ्कको अभाब भने रहदै आएको छ । नेपाल सरकारको तथ्याङक अनुसार प्रति बर्ष नेपालबाट करिब ४५,००० टन लौठ सल्लाका पातहरू विदेश निर्यात हुने गरेको छ तर ती पातहरूमा ‘माईरेइ यिउ’का पातहरूले कति अंश ओगट्छन् स्पष्ट छैन । लोपुन्मुख प्रजातीको आयात निर्यातलाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र साइटिसको अनुसुचि २मा राखिएतापनि उचित निगरानीमा प्रायः सबै बेखबर छन् । थोरै व्यक्तिहरुलाई मात्र यो सल्लाको उपयोगिता बारेमा थाहा छ, त्यसमध्ये पनि सिमित व्यक्तिहरुलाई यसको उत्पादनको बारेमा थाहा छ र मात्र केहि संरक्षणमा चिन्तित छन् ।
स्थानीयसंग सम्बादको क्रममा भिमदाई (सौजन्य सौगात बोलखे)
उँचो आवाज, बोलिरहने बानि , कलेटी परेका ओठ, भिम दाइमा म एक परिपक्क नेपाली प्रतिबिम्ब देखिरहेको थिए । स्थानीय डेरीमा एक क्यान दूध बेच्न पुगेका उनीलाई हामीले त्यहीँ भेटेका थियौँ । एक हातमा आलुमुनियम क्यान र अर्को हातमा चुरोटको ठुटो समातेका भिम दाइले प्रकाशलाई चिनी हाल्नु भयो । उहाँ सँगको साक्षात्कार पछीको केहि सामान्य संम्वाद पछी हामी बाटो तताउने सुरमा थियौँ । बाटो भिम दाइको सानो अनि चिटिक्कको घर हुदै जान्थ्यो । घर पुगेपछी नेपाली चलन नै हो खाजा खानाको लागी बोलाउने । अनि भिमदाई परे पक्काको नेपाली । दालभातको निम्तो आइहाल्यो । औपचारिकताको लागि नाई नास्ती गरेपनि अन्ततः हामी खाना खान उक्लियौँ, भोक जो लागेको थियो । विहानको खानापछी वन छिर्ने तयारी थियो त्यसैले जुत्ताका तुनाहरु कसीए । दाहिने हातमा खुर्पा समाई भिम दाइ हामीलाई जंगलको बाटो डोर्याउदै हुनुहुन्थ्यो । काम सामान्य थियो, जंगलमा भएका लौठ सल्लाहरु खोज्नु, तिनको मोटाई नाप्नु, ऊचाईको अनुमान लगाउनु र तिनिहरूको स्थान टिपोट गर्नु ।
पहाडको भिरालो बाटो सार्है घुमाउरो अनि झारपातले ढाकेको । तीन दिन अघि मात्र भुमिडाँडाको यो वनले भिषण हिँउदे वर्षा भोगेको थियो । जसै हाम्रो वन यात्रा गहिरियो भिम दाईको दुख पनि बढ्दै थियो । उहाँ बाटो बनाउदै हुनुहुन्थ्यो । वर्षाको कारणले बाटो चिफ्लो, साँघुरो अनि अप्ठ्यारो बनेको थियो । हावाले भाँचेर झारेका रुखका हाँगाहरु काट्दै, छाट्दै हाम्रो लागी सजिलो बाटो बनाउने काम त्यति सहज पक्कै थिएन । लगभग एक डेढ घन्टाको कष्टकर जंगल यात्रापछी बल्ल हामी अनुसन्धाको लागी खोजिएको रुखको सामुन्ने पुगेका थियौँ ।
रुख सायद २० फिट जति अग्लो थियो अनि त्यसका पातहरु उनिऊ जसरी फैलिएका थिए । वास्तवमै लौठ सल्लाको यस प्रजातिसँगको यो मेरो पहिलो भेट थियो । जङ्गलका हजारौ रुखहरुसंग काधमा काध जोडेर आकाश छुन उभिएको यो रुख बाहिरबाट हेर्दा बिल्कुल सामान्य देखिन्थ्यो तर आफु भित्र क्यान्सरको अचुक औषधी बनाउने फर्मुला लुकाएको थियो ।
साथी प्रकाश तथा भिमदाई यात्राको क्रममा (सौजन्य सौगात बोलखे)
प्रकाशले आफ्नो झोलाबाट नाप्ने फित्ता निकाले र त्यसको एउटा छेउ मलाई समाउन दिए । मैले फित्तालाई रुखको वरपर एक फन्को लगाए । रुखको उचाई कति थियो ठ्याक्क भन्ने अवस्था थिएन त्यसैले हामीले सरदर अनुमान मात्र लगायौँ ।
“कम्त्तिमा २० फिट त छ होला है ! भिम दाइ ?” प्रकाशले सोधे ।
“अ ! १८-२० फिट त पक्कै हुनु पर्ने हो ” भिमदाई सुस्तरी बोले ।
उचाई पनि डायरीमा टिपी प्रकाशले ब्यागबाट जी.पी.एस् निकाले र सिग्नल राम्ररी टिपोस भन्नका लागी केहि समय त्यसलाई हेरेर घोत्लिए । सानो मोबाइल जस्तो जी.पी. एस्. बाट निस्किएको जोएस्टिकलाई घुमाएर सो स्थानको देशान्तर, अक्षाशं र भौगोलिक उचाइ पनि डायरीमा टिपे । यति गर्नको लागी हामीलाई पाँच मिनेट पनि लागेन तर यहि काम हामीले आज दिनभर गर्नु पर्ने थियो । ‘बोरिंग हुन्छ कि क्या हो?’ म मनमनै सोच्न थाले ।
“झ्याउ लाग्दो छैन त सौगात ?” प्रकाशले मेरो भावना पढेर मध्य दिनमा मलाई सोधे ।
“छैन, छैन,” मैले ढाँटे । “यस्तै हुने हो नी अनुसन्धान भन्या । मज्जा आइराछ यार ।”
भुमिडाँडाको भिरालो वनपाखामा त्यो दिन यसैगरी लडिबुडी चलिरह्यो र दिनको आखिरमा पुगनपुग ३० वटा वयस्क रुखहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन भयो । रुखहरु नजिक थिएनन् । कुनै एउटा कुनामा हुन्थे त अर्को रुख अर्को डाँडोको कुनामा । धन्न भिम दाइ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाइ सबै रुखको बारेमा जानकारी थियो ।
केहि लौठ सल्लाका रुखहरु जरै देखि काटिएका थिए । ग्रिनहुडका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यस प्रजातीको व्यवस्थापन तथा दिगो उत्पादनका नियमावली तथा प्रक्रियागत रिपोर्टहरु उपलब्ध थिएनन् । जसको कारण मनपरी रुख काट्ने र भएका रुखहरुको पनि संरक्षणमा चासो नदिएको पाइयो । लौठ सल्ला वयस्क हुन नै दशौं वर्ष लाग्छ र यसको प्राकृतिक परागसेचन प्रकृया पनि जटिल छ । यसका लागि भाले विरुवा र पोथी विरुवा दुवै नजिकैको स्थानमा हुन आवश्यक हुन्छ । तर स्थानीयहरूलाई यो विषयमा त्यति चासो थिएन । उनीहरुलाइ प्राय उपयुक्त मोलमा बेच-बिखन गर्न पाईन्छ कि पाइदैन भन्नेमा मात्र चासो हुन गयो । फेरी उनीहरुको पनि आफ्नै ब्यथा थियो । यसको मोल प्राय तेस्रो पक्ष डिलरले आफ्नो मर्जी अनुसार तोकिदिने भएकाले लौठसल्ला खेतिमा आकर्षित किसानहरु पनि मारमा परेको देखियो । कतिपय औषधि उत्पादक कम्पनिहरुले पछिल्लो समयमा आवश्यकता अनुसार आफ्नै नर्सरीमा उत्पादन गर्न थालेपछि स्थानीयहरुलाई को आफ्नो घरसम्म आइदिने र कसले किनिदिने भन्ने अन्योल पनि बढेको बुझियो र जसको कारण पनि वेवास्ता बढ्न गयो ।
समस्या धेरै थिए त्यसैले समाधानको उपाय खोज्दै ग्रीनहुडका अनुसन्धानकर्ताहरुबाट योजना बन्न थाल्यो । “स्थानीयहरूको परम्परागत ज्ञानहरुलाई समेत समेट्दै लौठ सल्लाको ब्यवस्थित उत्पादन तथा संरक्षणको ब्यवहारिक पुस्तक समेत उपलब्ध गराउने हाम्रो तयारी छ”, पछिल्लो वार्तालापमा रेसु बस्यालले मलाई भन्नुभयो । तर नर्सरीबाट निकालिएका सल्लाहरु त हुर्काउन सकिएला तर जंगली लौठ सल्लाको संरक्षणमा भने को जागरुक हुने?
ग्रीनहुड टिम स्थानीयसंग छलफलको क्रममा (सौजन्य कुमार पौडेल)
कुमार पौडेल तर्क गर्नु हुन्छ कि फाइदामुलक ढंगले मात्र सोच्दा नकारात्मक असरहरु पनि बढ्न सक्छ । प्रथमत नर्सरीको प्रयोगका क्रममा जंगली लौठसल्लाको जथाभावि फडानी बढ्न सक्छ । कुनै एउटा रुखबाट हजारौँ बडहरु निस्केर बिरुवाहरू बनाउन सकिने भएकाले यसको काटछाँट हुनेसक्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । फेरी वनस्पति प्रसार (भेजिटेटिभ प्रोपागेशन) प्रकृयाबाट निकालिएका बिरुवाहरुको पनि आफ्नै जटिलताहरू हुन्छन् । त्यस्ता विरुवाहरुमा वशांणुगत विविधता लामो समयको अन्तराल पछि हराउदै जाने सम्भावना रहन्छ फलस्वरुप विरुवाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र रोगब्याधिको संग्क्रमण फैलने खतरा बढ्दछ । यसलाई भनिन्छ ‘इन्ब्रीडिन्ग डिप्रेसन’ जसले यस्ता लोपुन्मुख प्रजातीलाई लोप हुने खतरा तर्फ डोर्याउछन् ।
ग्रीनहुड टिम संरक्षणको लागी बिभिन्न तरिकाले वकालत गर्दै जागरुक्ताका गतिशिल कार्यहरूमा संलग्न रहेको छ । उक्त टिमले सल्लाको फसल उत्पादनको लागी दिशानिर्देशिकाको पहिलो मस्यौया प्रकासित गरेको छ र यसको थप संस्करण र प्रकाशनको लागी पनि काम गर्दै छ ।
एउटा ठुलो रुखको छहारीमा शीतल ताप्दै गर्दा दिनभरीको थकानलाई बिर्सी हामी खाजा खाने तर्खरमा थियौँ । कम्मरमा दिनभर भिरेको झोलालाई छेउमा बिसाएर वाई-वाई चाउचाउका पोकाहरू खोलिए साथै फ्रुटीका प्याकेटहरू प्वाल पारिए । यहि नै आजको जङ्गल यात्राको खाजा थ�